Ahoana ny fomba hamafana ireo fampiharana amin'ny Apple Watch | Vaovao IPhone
Zavatra tena mahazatra amin'ny gadget rehetra dia fampiharana fitsapana ary, inona ny momba ny lesona manaraka, esory izy ireo. Raha ny Apple Watch dia mahazatra kokoa raha azo atao ny mamafa ny rindranasa sasany izay, rehefa tonga ny fotoana dia heverinay fa tsy mendrika ny manana eo amin'ny tanana. Antony iray hafa mahatonga ny fanesorana ireo fampiharana no mety ny toerana misy amin'ny fitaovana. Toy ny saika ny stock Apple Watch, ny ny rafitra dia saika ny iray amin'ilay efa ampiasaintsika amin'ny iPhone, saingy manana fomba hanesorana ireo rindranasa amin'ny finday avo lenta avy amin'ny paoma manaikitra ihany koa izahay.
1 Ahoana ny fomba hamafana ireo fampiharana amin'ny Apple Watch
2 Ahoana ny fomba hanesorana ireo fampiharana Apple Watch amin'ny iPhone
Miverina amin'ny efijery an-trano (Carousel) an'ny Apple Watch izahay.
Manery izahay ary mitazona misy kisary hiditra amin'ny maody fanovana.
Rehefa manomboka mihozongozona ireo sary masina, milalao amin'ny X isika ny fampiharana izay tianay esorina.
Ao amin'ny varavarankely fampitandremana, mikitika hatrany isika Esory ny App.
(Jereo ny sary eo ambony)
Araka ny efa nolazainay, amin'ny fananana ny fampiharana Apple Watch amin'ny iPhone dia azontsika atao ihany koa ny mamafa ireo rindranasa amin'ny telefaona. Raha izaho manokana dia zavatra hitako tsy ilaina izany raha misy mivantana avy eo amin'ny famantaranandro ny safidy, saingy hazavaiko ny fomba fanaovana azy amin'ny iPhone.
Ahoana ny fomba hanesorana ireo fampiharana Apple Watch amin'ny iPhone
Manokatra ny application izahay Apple Watch amin'ny iPhone.
Nilalao izahay Ny famantaranandroko eo ambany.
Mihosotra isika ary mikasika ny anaran'ny fampiharana tiana hamafana izahay an'ny Apple Watch.
Tsy mandeha izahay ny safidy Asehoy ny app amin'ny Apple Watch.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Watch » Ahoana ny fomba hamafana ireo fampiharana amin'ny Apple Watch